Happy Anniversary – Two And Half Years | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » Happy Anniversary – Two And Half Years	16
Happy Anniversary – Two And Half Years
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jan 22, 2016 in My Dear Diary, Relationships & Family | 16 comments
အစက မတင်ဘဲနေမလို့ရယ် . .
ဒါမယ့် ရွာစုံတွဲဆိုတော့ကာ မှတ်တမ်းလေးတင်ပါဦးမယ် ဆိုပြီး လာတင်တာ . . .
ရွာသူရွာသားများ ကောင်းမှုနဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ သများတို့အတွဲ ဒီနေ့ နှစ်နှစ်နဲ့ ခြောက်လတိတိ ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း . . . .
(သဂျီးတစ်သိန်း သူမပြည့်ရင်နေ . . . သများပြည့်အောင်ယူမယ် . . :P )
Photo Credit to Ko Aung Moe Thu
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကိုအန် မီတျားဝူး ကိုအန် မီတယားဝူး
များဂို သစ်တာဖောက်ဒယ် ကိုအန့်ကို များလို ဖြတ်ဖောက်ချုပ် လုပ်ပစ်မယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: နာ့ဘဲဘဲလေးတော့ ချမ်းသာပေးပါအေ… သဂျားနဲ့ အလက်ဆင်း ကြိုက်တဲ့တစ်ယောက်သာ ယူဘာာာာာ
alinsett says: .ဗေလုဝနဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ…
အဲလေ…မှားလို့… သေချာကြည့်တော့မှ… အံဇာနဲ့ မွန်မွန်ကိုးးးးဟ…
နီတို့ ရှစ်တူ သက်တမ်းကို မြင်မိတော့မှ… နာနဲ့ ဖွေးဖွေးတောင်…ရှစ်တူသက်တမ်းဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ..
ပြန်တွက်ကြည့်ရအုန်းမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမလေး..ဖြစ်ရလေ.. သူ့ကျ. ဒိန်းဒေါင်ရုပ်နဲ့.. ဟွန်း..
ခင်ဇော် says: နောင်နှစ်များစွာ
ရွာကောင်းမှု အစုစု ကို
လုံမလေးမွန်မွန် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အံစရာနဲ့မွန်မွန်အောင်မြင်တဲ့ဘ၀ခရီးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုနဲ့အတူ အမြန်ဆုံးလက်တွဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေကြောင်း………… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: .. ditto..
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကျေးကျေးပါ အူးမိုက် နဲ့ အူးထူးဆန်း… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ..
အူးထူးဆန်းတို့ ကပ်စီးနည်းချက်များ.. ဆုပေးတာတောင် ditto နဲ့..
Mr. MarGa says: အဲ့ အတွဲကြား ကန့်လန့်ကန့်လန့် ရောက်မိနေတဲ့ဘဝက မြန်မြန်လွတ်ပရဇီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြောရသေးတယ်… ကန့်လန့်လိုက်စေချင်လွန်းလို့ လှမ်းခေါ်တာတောင် မလာနိုင်တဲ့သူကများ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: အေးကွယ် …
ပုံလေးတွေ မြင်လိုက်ရတာကိုပဲ ကျက်သရေ ရှိလှပါဘိကွယ် …
ဒီစုံ ဒီတွဲ လက်တွဲတွေ ထာဝစဉ် မြဲမြံကာရယ် …
ဘဝ ခရီးဝယ် အေးလည်း အတူ ပူလည်း အမျှကွယ် …
ကြည်ဖြူစွာ တူမကွာ ရွှေလက်တွေ မြဲစေကြောင်းရယ်
ပြောင်ပြောင်လည်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် …။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ပြောင်ဂျီး
နင်က နဖူးပြောင်တာလား ဖင်ပြောင်တားလား ဘာပြောင်တာလား
လုံမလေးမွန်မွန် says: နီနဲ့ မခေါ်ဝူး ပြောင်ကြီး.. နာမည်ကြားတိုင်း ပြောင်ကြီးသစ ကို မြင်လာတယ်…
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ်ရိုက်ပေးထားတာလေးတွေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရိုက်ပေးတဲ့သူ တော်တာရော… နဂိုလှတာရော ပေါင်းပြီး ပုံလေးတွေက အတော်လှတယ်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်ကို…